Soomaali / Barnaamijyada Waxbarashada Gaarka ah
Guud ahaan ardayda ayaa loo soo gudbiyaa barnaamiyadan iyadoo loo eegayo baahida waxbarasho taas oo laga yaabo in aan laga helin dugisyada kale.
Hadaan nahay Dugsiga Journeys ma aqbalno in lana sumadeeyo. Dugsigeenu wuxuu ardayda qaba naafanimda dhinaca dareenka ama dabeecada siiyaa nidaam ay ku bartaan xirfado ay kalsooni ku helaan. Ardaydu waxay subaxdii xooga saarayaan barashada cilmiga guud, galabtiina waxay ka qayb-qaadanayaan nashaadadda ku dhisan mashruucyo la xiriira shaqooyin, kuwaas oo u diyaarinaya ardada noloshooda dugsiga sare ka dib. Dugsigeena yar wuxuu ardayda u ogolaanayaa in ay xooga saaraan wixii mustaqbalkooda anfici-lahaa. Inta ay barnaamijkeena ku dhax jiraan waxaa laga yaabaa in ay ogaadaan awooda ay lahaayeen oo ka qarsoonayd, in ay bartaan waxyaaba ay danaynayaan oo cusub taas oo ay sii wataan markay waynaadaan.
Iyadoo diirada aan ku hayno caafimaadka maskaxda, barnaamijkeenu wuxuu ardayda fasalada k-8 siiyaa adeegyo caafimaad. Fasalo kooban – macalimku ma qabanayo in ka badan 8 arday– micnaheedu waa in ardaydu helayaan ogaansho shakhsi ah oo badan. Fasal walba wuxuu leeyahay macalin waxabarashada gaarka ah bara, mid caawiya, iyo dhakhtar cudurada maskada qaabilsan. Shaqaaleheena aadka u dadaala wuxuu la shaqeeyaa daryeelayaasha, dhakhaatiirta, xirfalayaasha kale si loo xaqiijiyo in barnaamijkeenu daboolayo baahida gaarka ah ee ardayga. Barnaamijkeena dhiirigalinta dabeecadaha wanaagsan, ardaydu waxay ka qaybqaadanyaan barnaamijka dhiirigalinta, iyaga oo markaas helaya dhibco markay xirfado wanaagsan iyo caafimaadka ka qaybqaataa.
Iskuullada Waxbarashada Gaarka ah
Dugsiyadeena waxbarashada gaarka ah waxay ardayda baahida wayn qaba siinayaan taageero iyo adeegya ay u bahanyihiin.
Hadaan nahay Bridge View, ma jiraan waxa caqabad ah oo hor istaagi karta ardaydeena; waa carqalado kaliya oo laga gudbi karo. Waxaan u adeegnaa ardayda qabta naafanimo ka timid dhinaca koriinka oo aad u daran laga soo bilaabo xanaanda kahor ilaa dugsiga sar.Shaqaalahanagu waxay aaminsanyihiin in arday walibaa gaari karo guul si kastaba naafo ha u ahaadee waxaan mar walba ku dadaalnaa sidii ay ardaydu ku gaari lahaayeen isku fillaansho. Iskuulkanagu wuxuu u diyaariyay ciyaarta dhismo meel cusub ah oo lugu ciyaaro taas oo daboolaysa baahida gaarka ah ee ardaydeena.. Shaqaaleheena si dhow ayuu waalidiinta ula shaqeeyaa si arday walba loogu dajiyo gool uu gaari karo. Ardaydu waxay baranayaan wada hadalka, kala doorashada waxyaabaha kale duwan, fahamka aduunka ay dareemayaan, arkayaan, si ay u soo saaraan waxyaabaha wanaagsan ee ku qarsoon.
Banraaijkeenu wuxuu caawiyaa ardayda u dhexeeya 18-21 sano, kuwaas oo aan helin waxbarashadii gaarka ahayd ee ay u baahnaayeen. Waxaa ardayda si dhow u la shaqeeya macaliin, takhsusayaal iyo hay’adaha jaaliyada si loo caawiyo in ay bartaan xirfadaha ay ugu baahanyihiin shaqada, tacliinta sare, iyo nolol xor ah. Barnaamijkeenu wuxuu ardayda siiyaa tababaro xirfadaha gacanta, oo lagu bixiyo goobaha bulshada, cashiro ka caawiya shaqooyinka, helida nolol xor ah, barashada wada hadalka si nabadoon, daryeelka naftooda iyo qorshaynta xirfadaha mustaqbalka. Barnaamijkeenu wuxuu ardayda siiyaan xirfadaha iyo adeegyada ay u baahanyihiin in ay guul ku gaaraan dugsiga ka dib.